CJSOI 2016 : mpanjakan’ny ranomasimbe Indianina ny Malagasy | NewsMada
CJSOI 2016 : mpanjakan’ny ranomasimbe Indianina ny Malagasy
Par Taratra sur 06/08/2016
Noporofoin’ny kilonga malagasy fa manana ny maha izy azy izy ireo ary tsy mena-mitaha amin’ireo firenen-kafa ny fahaizany sy ny zava-bitany. Nobatain’i Madagasikara mantsy ny laharana voalohany, amin’ny lalao CJSOI 2016.
Nanjakan’ny ankizy malagasy ny andiany faha-10 amin’ny lalao CJSOI 2016. Fihaonana ho an’ny tanora latsaky ny 17 taona ary natao teto Madagasikara. Nifarana tamin’ny fomba ofisialy omaly zoma, ny hetsika.
Nohamarinin’ireo atleta malagasy ny maha lohalaharana sy mpanjaka azy ireo aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina. Medaly volamena miisa 16 mantsy no indray norombahina, tamin’ireo taranja 5 nifaninanana dia ny baolina kitra ho an’olona 7 sokajy vehivavy, ny handball lehilahy, ny atletisma, ny judo ary ny tenisy ambony latabatra.
Tsy nitsanga-menatra mihitsy i Madagasikara, tamin’ny zava-bitan’ireo ankizy, tamin’ity. Anisan’ny nahazoana medaly volamena betsaka ny teo amin’ny judo sy ny atletisma. Ankoatra izay, nofaranan’ny Barea de Madagascar, tamin’ny fomba manetriketrika ny fahazoana ny medaly volamena, omaly tamin’ny alalan’ny fandresen’izy ireo ny Renionezy. Lavon’ny Barea tamin’ny alalan’ny fandakana ny “tirs au but”, 2 noho 0 i La Réunion, rehefa nisaraka ady sahala 1 sy 1, nandritra ny fe-potoana ara-dalàna. Toy izany koa ny fandrombahan’ny sokajy lehilahy sy vehivavy ny medaly volamena, teo amin’ny “course medley”.
Tsy nitsanga-menatra ihany koa ireo mpanohana ny lalao CJSOI sy ny ekipa malagasy. Anisan’izany, ny Telma izay nanome ny fomba moderina ka nahafahana nanaraka mivantana ny fihaonana sy nahazoan’ny mpanao gazety, nandefa ny vaovao ara-potoana. Teo koa ny DHL, nitondra ny fitaovana sy ny delegasiona ary ny Eau Vive, namatsy rano ho an’ny ekipa rehetra.